नेपाली चेलीको दुर्गति: काममा नगएपछि जुत्तै फुकालेर युवतीहरूलाई कुटेपछि… (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > प्रवास > नेपाली चेलीको दुर्गति: काममा नगएपछि जुत्तै फुकालेर युवतीहरूलाई कुटेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
नेपाली चेलीको दुर्गति: काममा नगएपछि जुत्तै फुकालेर युवतीहरूलाई कुटेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
admin January 12, 2022 प्रवास, भिडियो 0
पाथिभराअनलाइन । देशमा राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले आफ्नै देशमा रोजगारकाे अवसर पाउनेछन् भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो भएन । खै नेपाली माटोमा जन्मेका नेताहरूको मानसिकतामा परिवर्तन नआएर हाे या नेपालमा अवसरहरू नभएर हुन् ०४६ सालपछि को आँकडा हेर्ने हो भने विदेश जानेको तथ्याङ्क नै अत्यास लाग्दो छ ।
खर्च कम लाग्ने, नजिकको विदेश भनेर चिनिएका साउदीअरव, कतार, दुबइ या मलेसिया नै हुन् । विशेष गरि साउदी अरव, कतार मुश्लिम देश भएकाले यी देशहरूमा जाने नेपाली कामदारहरूले भोगेको दुःख बयान गरि साध्य नै छैन । यसै पनि भनिएको होइन, मुश्लिमहरू क्रुर हुन्छन्, भन्ने कुरा कतिपय अरेवियन मुश्लिमहरूको मानवियता जिरो भएको देखेपछि प्रष्ट देखिन्छ । यसो भनेर सबै मुश्लिमहरूलाइ एउटै तराजुमा राखेर जोख्न भने कहाँ मिल्छ र?
पछिल्लो समय नेपाली चेलीहरू पनि यी खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान थालेको देखिन्छ । घरका काम भनेर लगिन्छ र दिनरात घरको काममा खटिन बाध्य पारिन्छ । करिव दैनिक अठार घण्टा काममा लगाउने गरेको कुरा त ठुलो नै भएन । त्यसमा पनि मालिक भनाउँदाहरूले गर्ने दुर्व्यवहार पनि उत्तिकै पीडादायी हुन्छ । त्यसो त कति अरबियन मालिकहरूकाे विस्तारा नै बन्न परेका घटनाहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा नआएका भने होइनन् ।
अरेवियन देशमा गएका नेपाली चेलीहरूकाे पीडा सुनिदिने लगभग कुनै पनि सँस्था छैनन् भन्दा गलत चैं मानिदैन होला । फेरि पनि अरव तिर स्थापना भएका सँस्थाहरूले केहि कतै कुरा उठाएकाे नपाइएका पनि होइनन् तर समाधान वा यस्ता घटना हुन नदिनका लागि उनिहरूसँग कुनै उपाय वा नियम कानुन नै हुदैन । तलको भिडियोमा हेर्नुस् । होस्टेलमा बसेका नेपाली चेलीहरूलाइ यी अरेबियन आएर जुत्ताले समेत हान्न पछि परेनन् ।
साउदीमा नेपालीकाे पीडाः बिरामी हुदा नि काम गर्नु पर्ने यस्तो बाध्यता, साथीहरूसँग हारगुहार गर्दा पनि केहि लागेन (भिडियो हेर्नुस्)
यिनै हुन् २० बर्षिया कञ्चन पराजुली, जस्ले आफ्नै घरबेटीसंग खेलिन डरलाग्दो गेम, साथमा थिए ३ युवक !
भगवान राम जन्मेकाे अयोध्याका बारे ठोरीका मेयरले देखाए यस्तो अचम्मकाे स्थान (भिडियो सहित)